Eran-tany: Firohotan’ny Twitter Ho An’i #TroyDavis · Global Voices teny Malagasy
Eran-tany: Firohotan'ny Twitter Ho An'i #TroyDavis
Voadika ny 14 Oktobra 2011 12:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Any Etazonia, izay ara-dalàna ny sazy farantampony afa-tsy any amina fanjakana 14, ny raharahan'i Troy Davis dia nisarika ny hatezeran'ireo mafana fo mpandràra izany. I Davis dia voaheloka ho namono mpitandro filaminana iray tamin'ny 1989 nandritra ny fitsarana izay tsy nisy porofona ADN mahatafiditra azy amin'izany, fa fijoroana vavolombelona fotsiny, izay ny ankamaroany dia nanàla ny fanambaràny taty aoriana.
Nelohina ho faty i Davis, ary nokasaina hatao tamin'ny 17 Jolay 2007 ny famonoana azy voalohany. Taorian'ireo fampakàrana fitsarana nataon'ireo mpisolovavan'i Davis, ireo Fikambanana Tsy Miankina amin'ny Fanjakana, sy ireo olo-malaza maro, nahazo fampiatoana ny fanamelohana ho faty azy i Davis. In-droa nahemotra ny famonoana azy ho faty, ary samy nahazoany fampiatoana avokoa izany; avy eo, taorian'ny fiantsoana fitsarana federaly tamin'ny 2010 – izay nolavina – mbola nokasaina hatao indray ny fanamelohana ho faty azy, ho amin'ny 21 Septambra 2011
Naka ny sary: BigBoi, Twitpic
Miaraka amin'ireo mpisolovavan'i Davis, nitaky ny fampiatoana ny fanamelohana azy ho faty ireo fikambanana tahaka ny Amnesty, nandrisika hatramin'ireo olo-malaza tahaka an'i Kim Kardashian sy ilay mpiangaly rap BigBoi mba hanao antso avo any amin'ireo mpanaraka ny Twitter-n'izy ireo
Tanatin'ireo ora sy minitra nialoha ny fanamelohana ho faty, voatondro hotanterahina amin'ny 7 ora hariva any an-toerana, ireo olon-tsotra manerana izao tontolo izao dia nanohy nidina an-dalambe mba hitakiana ny fampiatoana ny fanamelohana azy ho faty. Nampiasaina ny tenifototra #Troy Davis, #TooMuchDoubt, ary ny #TheWholeWorldIsWatching.
Avy any Grande Bretagne, @Rachel_McCormack dia nitoraka bitsika:
Georgia aty ivelan'ny Masoivohon'i Etazonia aty Londona aho mangatsiaka sady mijery #thewholeworldiswatching
Mbola avy any Grande Bretagne ihany, i @CatherineBee dia nizara ny heviny:
“Tsara lavitra ny manafaka olon-dratsy toy izay manameloka olona tsy nanao na inona na inona.” Voltaire #thewholeworldiswatching #troydavis
@LizLemonCologne dia naneho fihetseham-po izay angamba nifampizaràn'ny maro:
Nahavaky ny foko tsotra izao ny fanarahana ‘ny tenifototra #thewholeworldiswatching . #troydavis
@monstris dia nalahelo:
Jereo ny Demokrasia amin'izao fotoana izao. Ankehitriny. Jereo ny firodanan'ny demokrasia ho an'i #TroyDavis. Dia manontany tena ny olona hoe maninona aho no nandao an'i Amerika. #thewholeworldiswatching
Ary avy any Gresy, i @helion dia niteny:
Demokrasia tandrefana iray, antsoina ho tanin'ny zon'olombelona, tsy tokony hàka ny ain'ny olom-pirenena iray mety ho nanan-tsiny #thewholeworldiswatching
Tamin'ny farany, lasa hiaka fiantsoana fidinana an-dalambe manohitra ny fanamelohana ho faty ny lehilahy iray mety ho tsy meloka akory ireo bitsika –feno hafanam-po. Minitra vitsy monja taorian'ny tamin'ny 7 ora alina, nipoaka ny vaovao tao amin'ny Twitter fa nahazo fampiatoana ny fanamelohana ho faty azy i Davis. Hoy @Colorlines:
Tsy mahaloa-peo! nitatitra ny @democracynow tamin'ny minitra farany fa nahazo fampiatoana ny fanamelohana ho faty izy! Jereo mivantana: http://democracynow.org #troydavis
Avy any Grande Bretagne, i @GrahamSimmons no mitsikera:
fandresen'ny maha-olombelona ny androany alina #troydavis #thewholeworldiswatching #fb…..
Nefa manoloana ny hafaliana, @graceishuman – mitatitra ireo vaovao avy any amin'ireo mpanangom-baovaon'ny @DemocracyNow ao amin'ny trano fitsarana – nanazava ireo vaovao, milaza hoe:
Namoaka fampiatoana ny fanamelohana ho faty an'i #troydavis ny SCOTUS – izay midika fa nahemotra (noho ny famakafakana lalina kokoa?) fa tsy nampiatoana. (avy amin'ny Democracy Now)
Nanamarina ilay tantara ny ABC News, nanambara fa “Ny Fitsarana Avo dia mety hanapa-kevitra amin'ny fotoana rehetra androany alina na mandritra ireo fito andro manaraka, na hanatanteraka na tsia ny fanamelohana azy ho faty.”